Translate apparatus and methods for trea in Burmese
Results for apparatus and methods for treatin... translation from English to Burmese
In early 2020, numerous established antiviral compounds for treating other infections were being repurposed or developed in new clinical research efforts to alleviate the illness of COVID-19.
2020 ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်၊ အခြားသောကူးစက်မှုများကိုကုသခြင်းအတွက် ဖော်ဆောင်ထားသည့် များစွာသော ပဋိဇီဝဆေးကွန်ပေါင်းများကို COVID-19 ဖျားနာမှုကို သက်သာစေရန် ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာစူးစမ်းလေ့လာမှုအသစ်များတွင် ပြန်လည်ရည်ရွယ် သို့မဟုတ် ဖော်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။
After the trial staff determines the drugs available at the hospital, the WHO website randomizes the hospitalized subject to one of the trial drugs or to the hospital standard of care for treating COVID-19.
စမ်းသပ်ဆဲ ပညာရှင်က ဆေးရုံများတွင်ရရှိနိုင်မည့် ဆေးများကို ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မည်ဆိုလျှင် WHO ဝက်ဘ်ဆိုက်က ဆေးရုံတက်နေသူများကို စမ်းသပ်ဆေးဝါးတစ်မျိုး သုံးစွဲရန် သို့မဟုတ် စမ်းသပ်ဆေးဝါးတစ်မျိုးစီကို COVID-19 အထူးကုသမှုပြုလုပ်သည့်ဆေးရုံများတွင် စမ်းသပ်သုံးစွဲရန် ကျပန်း သတ်မှတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
However, verification and clarification are necessary to propose the method for large-scale use before specific therapies are not yet developed.
သို့ရာတွင် တိကျသော ကုထုံးများ မဖွံ့ဖြိုးသေးမီ နည်းလမ်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုရန်အတွက် အဆိုတင်သွင်းရာတွင် စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းနှင့် သဘောပေါက်နားလည်စေအောင် ရှင်းလင်းခြင်းများ လိုအပ်သည်။
The International Clinical Trials Registry Platform of the WHO recorded 536 clinical studies to develop post-infection therapies for COVID-19 infections, with numerous established antiviral compounds for treating other infections under clinical research to be repurposed.
WHO ၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆေးဝါးစမ်းသပ်မှုများ မှတ်ပုံတင် ပလက်ဖောင်းတွင် အခြားကူးစက်ရောဂါများကိုကုသရန်အတွက် ဆေးဝါးသုတေသနပြုထားသည့် ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေး ဆေးဝါးများစွာကို COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုများအတွက် ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်၍ ကူးစက်ပြီးနောက်ပိုင်း ကုထုံးများတွင် အသုံးပြုရန် ဆေးသုတေသနပေါင်း 536 ခုကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု FDA က ထိုလအကုန်တွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ပထမဆုံး စောင့်ရှောက်မှု နေရာအမှတ် စမ်းသပ်ခြင်းကို 2020 ခုနှစ် မတ်လ 21 ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုခဲ့သည်။ ဝူဟန်တက္ကသိုလ် Zhongnan ဆေးရုံက ထုတ်ပြန်သော ရောဂါရှာဖွေမှု လမ်းညွှန်ချက်များက ဆေးကုသရာတွင် ပြသမှုများနှင့် ကူးစက်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်များအပေါ် အခြေပြုရှာဖွေသည့် နည်းလမ်းများကို အကြံပြုထားသည်။
ACE2 counters the activity of the related angiotensin-converting enzyme (ACE) by reducing the amount of angiotensin-II and increasing Ang(1-7) making itapromising drug target for treating cardiovascular diseases.ACE2 also serves as the entry point into cells for some coronaviruses.
ACE2 သည် Angiotensin-II ပမာဏကို လျော့ချခြင်း၊ Ang (1-7) ပမာဏကို တိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့် ယင်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် Angiotensin Converting Enzyme (ACE) ၏ လုပ်ငန်းကို တားဆီးသည့် အတွက် ၎င်းသည် နှလုံးနှင့် သွေးကြောဆိုင်ရာ ‌ရောဂါများ ကုသရာ၌ အလွန် အသုံးဝင်သည်။ ACE2 သည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အချို့အတွက် ဆဲလ်အတွင်းဝင်ပေါက်များအဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်သည်။
This means that the virus is spreading within communities, and some community members don't know where or how they were infected.Health care providers taking care of someone who may be infected are recommended to use standard precautions, contact precautions, and eye protection.Contact tracing is an important method for health authorities to determine the source of an infection and to prevent further transmission.
ဆိုလိုသည်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်များအတွင်း ပျံ့နှံ့လျက်ရှိပြီး ထိုအသိုင်းအဝိုင်းများအတွင်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် ၎င်းတို့ မည်သည့်နေရာမှ မည်သို့ ကူးစက်ခံခဲ့ရသည်ကို မသိကြပါ။ ရောဂါကူးစက်နေနိုင်သော တစ်စုံတစ်ဦးအား စောင့်ရှောက်မှုပေးရသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့် စံပြု ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ၊ ထိတွေ့မှု ကြိုတင် ကာကွယ်ခြင်းနှင့် မျက်လုံးအကာအကွယ်များကို အသုံးပြုကြရန် အကြံပြုပါသည်။ ထိတွေ့မှု ခြေရာကောက်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များအတွက် ရောဂါကူးစက်မှု၏ အရင်းအမြစ်ကို ဆုံးဖြတ်ရန်နှင့် ထပ်မံကူးစက်မှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အရေးကြီးသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ampule (Croatian>German)वह जाता है (Hindi>English)nalanta ang bulaklak (Tagalog>English)nagsimula naman ako sa bandang likuran (Tagalog>English)jathi kai (Tamil>English)jevlis ka in english translations (Hindi>English)incitabant (Latin>English)pavadinimas (Lithuanian>Xhosa)main sota hu (Hindi>English)tu eres tan hermoso (Spanish>English)call me up (English>Hindi)makadungog (Cebuano>Danish)zijn (Dutch>Polish)kuljetusta (Finnish>English)helpdesk (Finnish>English)sub se omnia (Latin>Italian)sei dolcissimo (Italian>English)piperazinyl (English>Polish)porque exolica muito bem (Portuguese>English)ano ibig sabihin ng pagiging hayag o bukas (Tagalog>English)victory song (English>Tagalog)novis (Latin>Italian)murio (Spanish>English)goc nho trong tim (Vietnamese>English)dividir (Spanish>English)